प्रज्ञामा ‘जीवैमामा–ज्यो मा रे’बारे छलफल « Drishti News – Nepalese News Portal
प्रज्ञामा ‘जीवैमामा–ज्यो मा रे’बारे छलफल
काठमाडौं, १९ फागुन । मगर जातिको लोपोन्मुख गीतिनाटक ‘जीवैमामा–ज्यो मा रे’बारे विचार गोष्ठी आयोजना गरिएको छ । शनिवार कमलादीको प्रज्ञा भवनमा सामाजिकशास्त्र विभाग र मगर अध्ययन केन्द्रद्वारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका पूर्वकुलपति तथा वरिष्ठ कवि बैरागी काइँलाले नेपाल विविध जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिले भरिपूर्ण देश भएको उल्लेख गर्दै मगर जातिको संस्कृति विशिष्ट रहेको बताए ।
उनले मगर जातिको लोपोन्मुख गीतिनाटक सम्बन्धी गोष्ठीले आँखीझ्यालबाट चियाएको जस्तो अनुभूति भएको विचार व्यक्त गरे । नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, सामाजिकशास्त्र विभागका प्रमुख प्राज्ञ प्रा. दिनेशराज पन्तले मगर जाति विशिष्ट परम्परा र संस्कृति सम्पन्न जाति भएको बताए ।
मगर अध्ययन केन्द्रका अध्यक्ष डा. गोविन्दबहादुर थापा मगरले मगर संस्कृति राष्ट्रिय सम्पत्ति भएको उल्लेख गर्दै मगर जातिमा प्रचलित संस्कृतिको संरक्षणका लागि नयाँ पुस्ता र सम्बन्धित सबै लाग्नु पर्नेमा जोड दिए ।
गोष्ठीमा डा. मीन श्रीसमगरले मगर जातिको लोपोन्मुख गीतिनाटक ‘जीवैमामा÷ज्यो मा रे’ सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उनले उक्त गीतिनाटक कालीगण्डकी र राप्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मगर जातिमा प्रचलित मामाचेली विवाहमा आधारित संस्कृति भएको बताए । कार्यक्रममा गीतिनाटकका विषयमा निर्मित बृत्तचित्रसमेत देखाइएको थियो । कार्यक्रम केन्द्रकी सचिव प्रतिभा पुनले सञ्चालन गरेका थिए ।